Ethernet Switch1 mpanamboatra sy mpamatsy | China Ethernet Switch1 Factory
8 Port 1000Mbps Ethernet mankany 2 Fiber Switch Model ZJ-1000228-S20
8 Port 1000Mbps Ethernet mankany 2 Fiber Switch dia haino aman-jery varahina 1000BASE-FX Ethernet mankany amin'ny Fiber 1000Base-TX. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny famindrana fibre hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Azo ampiasaina ho irery izy io. Endri-javatra • 8 Port 100 / 1000M Ethernet + 2 Port Fiber Switch, SC • antsasaky na fifandimbiasan-tena auto duplex • 100 / 1000Mbps fifampidinihana ho an'ny seranana varahina • Auto MD ...
8 Port 1000Mbps Ethernet mankany 1 Fiber Switch Model ZJ-1000208-S20
8 Port 1000Mbps Ethernet mankany Fiber Switch dia haino aman-jery varahina 1000BASE-FX Ethernet mankany amin'ny Fiber 1000Base-TX. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny famindrana fibre hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Azo ampiasaina ho irery izy io. Endri-javatra • 8 Port 100 / 1000M Ethernet + 1 Port Fiber Switch, SC • antsasaky na fifandimbiasan-tena auto duplex • 100 / 1000Mbps fifampidinihana ho an'ny seranana varahina • Auto MDI / M ...
2 Port 1000Mbps Ethernet mankany Fiber Switch ZJ-1000204-S20
2 Port 1000Mbps Ethernet mankany Fiber Switch dia haino aman-jery varahina 1000BASE-FX Ethernet mankany amin'ny Fiber 1000Base-TX. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny famindrana fibre hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Azo ampiasaina ho irery izy io. Endri-javatra • 4 Port 100 / 1000M Ethernet + 2 Port Fiber Switch, SC • antsasaky ny fifanakalozan-kevitra momba ny auto duplex • 100 / 1000Mbps fifampiraharahana ho an'ny seranana varahina • Auto MDI / M ...
2 Seranana 100 / 1000Mbps Ethernet Fiber Switch Model ZJ-1000102-25
2 Ports 100 / 1000Mbps Ethernet Fiber Switch dia haino aman-jery varahina 1000BASE-FX Ethernet ho an'ny fibre 1000Base-TX. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny famindrana fibre hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Azo ampiasaina ho irery izy io. Endri-javatra • 2 Port 100 / 1000M Ethernet + 1 Port Fiber Switch, Single Mode Dual Fiber • antsasaky na feno duplex auto-fifampiraharahana • 100/1000 Mbps fifampiraharahana mandeha ho azy ...
24 Port L2 / L3 Ethernet tantanana ZJ8300-28G-4TF
24 Port L2 Management Ethernet Switch, manome 350Gbps switching capacité, avo lenta indrindra; Manana fampisehoana mandroso 96Mpps, mandroso haingana i L2 / L3. Ny endrika maodely dia manome seranan-tsambo 24 10/100 / 1000M Ethernet Ethernet RJ45, ary 4 port 10G SFP + slot, seranan-tsambo 1 Console. Omeo fantsom-pifandraisana ampy ho an'ny fifanakalozana angona sy data core. Ny mpampiasa dia afaka misafidy seranana 10G arakaraka ny tinady hahazoana antoka ny fiasan'ny tambajotra sy ny fifandanjana entana. L2 10G fitantanana fitantanana miaraka amin'ny bandw avo ...
8 Port 100Mbps Ethernet mankany Fiber Switch Model ZJ-100108-25
10 / 100M Optic Fiber Switch dia haino aman-jery varahina 100BASE-FX Ethernet mankany amin'ny Fiber 100Base-TX. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny famindrana fibre hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Azo ampiasaina ho irery izy io. Endri-javatra • 8 Port 10 / 100M Ethernet + 1 Port Fiber Switch, Single Mode Dual Fiber • antsasaky na feno duplex auto-fifampiraharahana • 10/100 Mbps fifampiraharahana mandeha ho azy ho an'ny port varahina • Auto MDI ...
4 Port 10 / 100Mbps Ethernet + 2 port Fiber Optic Switch Model ZJ-100204-25
10 / 100M Optic Fiber Switch dia haino aman-jery varahina 100BASE-FX Ethernet mankany amin'ny Fiber 100Base-TX. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny famindrana fibre hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Azo ampiasaina ho irery izy io. Endri-javatra • 4 Port 10 / 100M Ethernet + 2 Port Fiber Switch, Single Mode Dual Fiber • antsasaky na feno duplex auto-fifampiraharahana • 10/100 Mbps fifampiraharahana mandeha ho azy ho an'ny port varahina • Auto MDI ...
4 Port 100Mbps Ethernet mankany Fiber Switch Model ZJ-100104-25
10 / 100M Optic Fiber Switch dia haino aman-jery varahina 100BASE-FX Ethernet mankany amin'ny Fiber 100Base-TX. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny famindrana fibre hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Azo ampiasaina ho irery izy io. Endri-javatra • 4 Port 10 / 100M Ethernet + 1 Port Fiber Switch, Single Mode Dual Fiber • antsasaky na feno duplex auto-fifampiraharahana • 10/100 Mbps fifampiraharahana mandeha ho azy ho an'ny port varahina • Auto MDI ...
2 Seranana 10 / 100Mbps Ethernet Fiber Switch Model ZJ-100102-25
2 Ports 10 / 100Mbps Ethernet Fiber Switch dia haino aman-jery varahina 100BASE-FX Ethernet mankany amin'ny Fiber 100Base-TX. Omeo vahaolana mora sy ara-toekarena hanatsarana ny tambajotra miorina amin'ny varahina amin'ny fibre optika hanitatra ny tratry ny fambara. Ny halaviran'ny famindrana fibre hatramin'ny 120km. Famolavolana plug-and-play, mora apetraka. Azo ampiasaina ho irery izy io. Endri-javatra • Ethernet 2 Port 10 / 100M + 1 Port Fiber Switch, Single Mode Dual Fiber • Antsasaky ny fifanakalozan-kevitra mandeha ho azy na feno • 10/100 Mbps fifampiraharahana mandeha ho azy ho an'ny varahina ...